Kovid-19 မီးရထားခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီKovid-19 မီးရထားခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ!
18 / 05 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ရထားများတွင်ယူ coronavirus ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Adil Karaismailoğluသည် Lapseki ရှိမီဒီယာများသို့နောက်ဆုံးပြောကြားချက်ကို akkanakkale Bosphorus တံတား၏သံမဏိတာဝါတိုင်များတွင်နေရာချခြင်းအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ကာလသစ်အတွက်သူ၏ ၀ န်ကြီးဌာန၏စီမံကိန်းများကိုဖော်ပြရာတွင်Karaismailoğluက“ ကျွန်တော်တို့ဟာအဝေးပြေးလမ်းမအခြေခံအဆောက်အ ဦ တွေကိုပြီးစီးပါပြီ။ အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံကိုလည်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ရထားလမ်းလည်းမလုံလောက်ဘူး။ လာမယ့်ကာလမှာမီးရထားလမ်းကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အခု ၁၂၀၀၀ ကီလိုမီတာကွန်ယက်ရှိတယ်။ ကီလိုမီတာ ၂ ဝဝဝမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကွန်ယက်ကိုတိုးမြှင့်သောအခါကီလိုမီတာ ၁၇၀၀၀ ကွန်ယက်နှင့်အရိုးစုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ငါးဖမ်းလမ်းကြောင်းကိုစက်မှုဇုန်များအတွင်းသို့တင်ပြီးစီးပွားရေးစွမ်းအားကိုကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပေါင်းစပ်မည်ဖြစ်သည်။
Karaismailoğluကအမြန်ရထားလမ်းနှင့်မြို့ပြလိုင်းနှစ်ခုစလုံးတွင်ပြည်သူပိုင်သိမ်းမှုသည်ခုန်ပျံ့နှံ့နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Coronavirus ကပ်ဆိုက်ပြီးနောက်တိုင်းပြည်၏ဘဝသည်ပြောင်းလဲသွားမည်၊ ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရထားတွင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ ရထားတွေကလည်း ၅၀ ရာနှုန်းစွမ်းရည်နဲ့လည်ပတ်မှာပါ။ နောက်ကျောတွင်ကျန်းမာရေးအတွက်နေရာလွတ်များရှိလိမ့်မည်။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ခေတ်သစ်နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိရန်ဘဏ္Financialာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်သည်။ သူတို့ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရန်လိုအပ်သည်။ သုတေသီများအဆိုအရကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နှစ်၌ပင်ယခုရာသီ၌ပင်လေကြောင်းလိုင်း၏ဇန်နဝါရီလကိန်းဂဏန်းများကိုမဖမ်းနိုင်ပါ။ ရထားပေါ်တွင်အလားတူကိန်းဂဏန်းများရှိပါသည်။ နိုင်ငံ၏ဘဝသည်ယခုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သူတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းဆောက်လုပ်ရေးနေရာများပြန်လည်စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ပေး၍ Karaismailoğluက“ အလွန်ကျန်းမာပြီးအထီးကျန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆက်လက်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စေသည်။ ငွေပေးချေတဲ့အခါမှာအဲဒီအလုပ်ကလုပ်တဲ့ဒေသရှိကုန်စုံဆိုင်သို့သွားသည်။
နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပြုလုပ်သော Coronavirus အစီအမံ
မီးရထားပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (တူရကီအတွက် Intermodal ပို့ဆောင်ရေး ...
တင်ဒါအသိပေးချက် - Pendik YHT ဘူတာတွင် AYGM မှ YHT အားယာယီဖွင့်လှစ်ခြင်း…
ရထားပို့ဆောင်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအားဖြင့်အန္တရာယ်ကုန်စည်၏ DTD နှင့်ပေါင်းချုပ်ပို့ဆောင်ရေးကျင်းပ
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားမီးရထားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှ Inc ၏နယူးအဖွဲ့ဝင်
Broken တစ်နှစ်တာစံချိန်တင်၏လေကြောင်းလိုင်းများကသယ်ဆောင်ခရီးသည်များ၏ 12 အရေအတွက်
ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက် Begin မှ BTK မီးရထားလိုင်း
သယ်ဆောင်ခရီးသည်အရေအတွက် Marmaray 6,5 သန်းကိုကျော်လွန်
TCDD Stations တယ်လီဖုန်းနံပါတ်စာရင်း - လက်ရှိ ၂၀၂၀
နေ့စဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခရီးသည်အရေအတွက်ကိုအတွက် 130 တထောင်ခုနှစ်တွင် KAYSERAY
ခေတ်္ဘပိင်နှင့်အတူရထားလမ်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "rep သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်း"
ပိုလန် - ယူကရိန်း - ရုရှား ၂၀၁၂ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ...
ဝန်ကြီး Turhan: "44 သန်းရန်လာနှင့်အတူပို့ဆောင်ခရီးသည်များ၏ YHT နံပါတ်"